Huawei wuxuu kordhiyaa iibkiisa 50% rubuca hore | Androidsis
Maalmo ka hor ayaa shaaca laga qaaday in Sony waxay saxiixday iibkeedii ugu xumaa rubuca hore ee sanadka. Intaa waxaa sii dheer, Samsung sidoo kale kuma bilaabin sanadka lugta midig, tan iyo markii shirkadda Kuuriya ay soo bandhigtay qaar natiijooyin aad u xun. Tan waa in lagu daraa hoos u dhaca iibka, taas oo ka tagaysa shirkadda dareen xumo. Xaaladda aad ayey uga duwan tahay shirkadda Huawei, kaasoo sifiican u bilawday sanadka.
Soo saaraha Shiinaha wuxuu xirayaa rubacii hore ee sanadkaan kororka xusida iibka. Sidan oo kale, Huawei waxay ku sii socotaa isbeddel la mid ah kii sanadkii hore, kaasoo ku xirmay kororka iibka oo ah 37%. Maxaa ka dhigaya inay ku sii dhowaadaan Samsung suuqa.
Dhowr usbuuc ka hor waxaa horey u jiray hadal ah in iibinta nooca Shiinaha ku kordhay 50%, sida ay shirkadda lafteeda u wada xiriirisay. Hadda waxaan ugu dambeyntii haynaa tirooyinka iibka saxda ah ee shirkadda Huawei, marka lagu daro noocyo kale. Iyaga ayaa mahad leh waxaan arki karnaa boodboodka cajiibka ah ee sumadda Shiinaha ay ku guuleysatay inay ku sameyso suuqa.
1 Huawei wuxuu isku daraa kaalinta labaad
2 Huawei wuxuu kordhiyaa iibkiisa
Huawei wuxuu isku daraa kaalinta labaad
Sannadkii hore shirkadda Huawei waxay ku guuleysatay inay ka sarreyso shirkadda Apple oo ah shirkadda labaad ee ugu iibinta badan adduunka. Wax mar labaad lagu celceliyo, oo si cad u caddaynaysa in sumaddu durba isku taagtay booskan. Samsung wali waa hogaamiyaha suuqa, oo leh saamiga suuqa oo ah 23,1%, in kasta oo ay lumiyeen xoogaa dhul ah marka loo eego sanadkii hore. Wax ay sumadda Shiinaha awood u yeelatay inay ka faa'iideysato, oo hadda leh saamiga suuqa ee 19%, oo marba marka ka dambeysa sii dhowaanaya.
Sidan oo kale, Apple ayaa sii kordheysa Huawei. Nooca Mareykanka ayaa ku qanacsan booska seddexaad ee rubuckan koowaad, oo leh suuq dhan 11,7%, taas oo ka dhigan hoos u dhac muuqda marka la barbar dhigo sanadkii hore. Intaa waxaa dheer, qaabkan, noocyada sida Xiaomi, Vivo iyo OPPO, oo xiraya liistada, ayaa waxyar u soo dhowaanaya.
Waxyaabaha xiisaha leh ayaa ah marka laga reebo Huawei iyo Vivo, astaamaha intiisa kale waxay xireen rubucii koowaad ee sanadka iyadoo hoos u dhac ku yimid iibka. Xiaomi sidoo kale waxay bixisay xoogaa dhul ah, inkasta oo ay tahay tan hoos ugu dhacday iibka. Taas bedelkeeda, waxaan haynaa kiiska Apple, oo ah kan ugu dhacay. Iibinta liidata ee jiilkeedii ugu dambeeyay ee iPhone ayaa astaanta ka fogeeya booska labaad ee suuqa.
Huawei wuxuu kordhiyaa iibkiisa
Sida lagu soo warramay dhowr toddobaad ka hor, iibka shirkadda Huawei ayaa qarxay rubucii ugu horreeyay ee sannadka 2019. Isla muddadan sanadkii la soo dhaafay, socodkii Shiinaha wuxuu adduunka oo dhan ku iibiyay 39,3 milyan oo taleefannada casriga ah. Iibinta ay ku jireen kaalinta saddexaad ee suuqa. Sanad kadib xaaladdu waa is bedeshay, tan iyo markii ay hadda ku xirmaan 59,1 milyan oo telefoon iibiyay, oo ah sumadda labaad.
Intaas waxaa sii dheer, ka fogaanshaheeda Samsung ayaa si muuqata loo gaabiyey. Sannadkii hore sumadda Kuuriya ayaa iibisay 78,2 milyan oo taleefanno ah rubuckan koowaad. Halka sannadka 2019 iibkiisu wuxuu u dhacay 71,9 milyan oo telefoon. Waa wax yar oo dhibic ah, laakiin waxay muujineysaa inay wax xoogaa suuqa ka sii daayeen arrintan. In kasta oo shirkadda lafteedu mar horeba caddeysay inay rajaynayaan inay kordhaan iibka rubuca labaad.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko sida iibku u kobcayo bilaha soo socda. Huawei wuxuu horey u sheegay inta udhaxeysa 2019 iyo 2020 horeba waxay u noqon kartaa hoggaamiyeyaasha suuqa taleefanka. Halka Samsung ay ku adkeysaneyso inay iyaga yihiin hogaamiyaasha. xitaa 10ka sano ee soo socda. Marka dagaalka loogu jiro helitaanka booska koowaad ee suuqa wuxuu ballanqaadayaa in si kulul loogu tartamo. Waan arki doonaa waxa dhaca rubuckan labaad ee sanadka. Gaar ahaan hadda in labada saf ee sare, P30 iyo Galaxy S10, horeyba adduunka looga iibiyaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Iibinta Huawei ayaa kor u kacday rubuca koowaad
Facebook wuxuu soo bandhigayaa waxa ku cusub Messenger sanadka 2019